ShwengweGames - Page 397 of 418 - News & Media
အကြောက်လွန်နေတဲ့ဒေါက်တာကခွဲစိတ်ခဲ့တာမို့၊အမှားအယွင်းဖြစ်ပြီး အခြေ အနေပိုဆိုးခဲ့တဲ့ ကင်ဂျုုံအန်ရဲ့ ကျန်း မာရေး အခြေအနေ
April 27, 2020 by Shwengwe Games
အခုလက်တလော သတင်းတွေမှာတော့ ကင်ဂျုံအန် သေပြီ၊မသေသေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ အပြိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော် အသိုင်းအဝိုင်းကတော့အခုအရေးမှာမယုတ်မလွန် ပြောကြားနေပါတယ်။ဆိုရရင် အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတောင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းက အ တည်ပြုထားခြင်းမရှိဘဲ၊စုံစမ်းထောက် လှမ်းနေဆဲလို့သာဖြေခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့် ကန်လွတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ကတော့ကင်ဂျုံအန်ဟာဦးနှောက်အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက်၊မသန်စွမ်းဘဝ ဒုက္ခိတဘဝကိုရောက်သွားတယ်လို့ ကြားကြောင်း၊ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့အတည် ပြုဖို့ ခက်ခဲပေမယ့်၊သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကတော့ဒါဟာတရုတ်ရဲ့စနက်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်အရေးကို ကမ္ဘာက တရုတ်ကို လက်ညှိုးဝိုင်းထိုးနေချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုကင်ဂျုံအန်ဘက်လွှဲပေးလိုက်ပြီးဖိအားတွေရှောင်ရှားဖို့တရုတ်က ကြိုးစားခဲ့တာလို့သူကစွပ်စွဲထားတာပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲကင်ဂျုံအန်ဟာ မကြာမီ လူမြင်ကွင်းမှာဘွားကနဲပြန်ထွက်လာမှာပါလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ The Sun သတင်းစာမှာတော့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အထူးအိမ်တော်မှာသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရထားတွဲ- ဆိုက်ကပ်ထားပုံကိုဂြိုဟ်တုကဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အရေးပေါ်အ ခြေအနေ တစ်ခုခု ဖြစ်နေပုံရတယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုအခြေစိုက် Shukan Gendai မဂ္ဂဇင်းမှာ ကင်ဂျုံအန်ဟာ အရေးပေါ်ခုတင်ထက်မှာ စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း၊ သူ့ကို ခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဟာအမှားအယွင်း တစုံတရာဖြစ်မှာကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့လို့လက်တွေကတုန်ကယင်ဖြစ်ကာမထိသင့်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေကိုဓားကထိခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကင်ဂျုံအန်ရဲ့နှလုံးခွဲစိတ်မှုဟာ မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသ ပတေးနေ့က တရုတ်ဘက်က အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာထိပ်သီးခေါင်း ဆောင်တွေ မြောက်ကိုရီးယားကို အရေးပေါ်သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှအမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးကသူတို့အဖွဲ့ရောက်တာ အလွန်နောက်ကျခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ သေဆုံးနဲ့ ရှင်သန်ကြားမှာ သေဆုံးဘက်က ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။ကင်သေဆုံးတယ်ဆိုရင် (၄၈)နာရီအတွင်းမှာ မြောက်ကိုရီယားရုပ်သံတွေကတရားဝင်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ (၄၈)နာရီ သို့မဟုတ် (၇၂) နာရီနောက်ပိုင်းမှာကြေညာခြင်းမပြုဘူးဆိုရင်တော့သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ကောလာဟလတွေသာဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်မြောက် ကိုရီးယားအာဏာရှင်ရဲ့ကျန်း မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပဟေဠိတွေကတော့ ဆက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Credit -လင်းဇော်ကို(D Nae Khit)
အေၾကာက္လြန္ေနတဲ့ေဒါက္တာကခြဲစိတ္ခဲ့တာမို႔၊အမွားအယြင္းျဖစ္ၿပီး အေျခ အေနပိုဆိုးခဲ့တဲ့ ကင္ဂ်ဳုံအန္ရဲ႕ က်န္း မာေရး အေျခအေန
အခုလက္တေလာ သတင္းေတြမွာေတာ့ ကင္ဂ်ဳံအန္ ေသၿပီ၊မေသေသးဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြဟာ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့အခုအေရးမွာမယုတ္မလြန္ ေျပာၾကားေနပါတယ္။ဆိုရရင္ အေျခအေနမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့စကားကိုေတာင္ အေမရိကန္အာဏာပိုင္အသိုင္းအဝိုင္းက အ တည္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ၊စုံစမ္းေထာက္ လွမ္းေနဆဲလို႔သာေျဖခဲ့တာပါ။ဒါေပမယ့္ ကန္လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ကေတာ့ကင္ဂ်ဳံအန္ဟာဦးေႏွာက္အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့အတြက္၊မသန္စြမ္းဘဝ ဒုကၡိတဘဝကိုေရာက္သြားတယ္လို႔ ၾကားေၾကာင္း၊ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့အတည္ ျပဳဖို႔ ခက္ခဲေပမယ့္၊ေသဆုံးတယ္ဆိုတဲ့သတင္းကေတာ့မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။နိုင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကေတာ့ဒါဟာတ႐ုတ္ရဲ႕စနက္လို႔ စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။
ကိုဗစ္အေရးကို ကမာၻက တ႐ုတ္ကို လက္ညွိုးဝိုင္းထိုးေနခ်ိန္မွာသတင္းမီဒီယာေတြကိုကင္ဂ်ဳံအန္ဘက္လႊဲေပးလိုက္ၿပီးဖိအားေတြေရွာင္ရွားဖို႔တ႐ုတ္က ႀကိဳးစားခဲ့တာလို႔သူကစြပ္စြဲထားတာပါ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကပဲကင္ဂ်ဳံအန္ဟာ မၾကာမီ လူျမင္ကြင္းမွာဘြားကနဲျပန္ထြက္လာမွာပါလို႔ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ The Sun သတင္းစာမွာေတာ့ကင္ဂ်ဳံအန္ရဲ႕အထူးအိမ္ေတာ္မွာသူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ရထားတြဲ- ဆိုက္ကပ္ထားပုံကိုၿဂိဳဟ္တုကဓာတ္ပုံရိုက္နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္အေရးေပၚအ ေျခအေန တစ္ခုခု ျဖစ္ေနပုံရတယ္လို႔ ယူဆထားပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳအေျခစိုက္ Shukan Gendai မဂၢဇင္းမွာ ကင္ဂ်ဳံအန္ဟာ အေရးေပၚခုတင္ထက္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေၾကာင္း၊ သူ႕ကို ခြဲစိတ္ခဲ့တဲ့ေဒါက္တာဟာအမွားအယြင္း တစုံတရာျဖစ္မွာကိုအလြန္ေၾကာက္႐ြံ႕လို႔လက္ေတြကတုန္ကယင္ျဖစ္ကာမထိသင့္တဲ့ ကိုယ္အဂၤါေတြကိုဓားကထိခဲ့ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကင္ဂ်ဳံအန္ရဲ႕ႏွလုံးခြဲစိတ္မႈဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသ ပေတးေန႕က တ႐ုတ္ဘက္က အထူးကုဆရာဝန္ေတြနဲ႕ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္ေတြ ေျမာက္ကိုရီးယားကို အေရးေပၚသြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွအမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးကသူတို႔အဖြဲ႕ေရာက္တာ အလြန္ေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ေသဆုံးနဲ႕ ရွင္သန္ၾကားမွာ ေသဆုံးဘက္က ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ယူဆရမွာပါ။ကင္ေသဆုံးတယ္ဆိုရင္ (၄၈)နာရီအတြင္းမွာ ေျမာက္ကိုရီယား႐ုပ္သံေတြကတရားဝင္ေၾကညာဖို႔ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ (၄၈)နာရီ သို႔မဟုတ္ (၇၂) နာရီေနာက္ပိုင္းမွာေၾကညာျခင္းမျပဳဘူးဆိုရင္ေတာ့ေသဆုံးတယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ ေကာလာဟလေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရဖို႔ရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေျမာက္ ကိုရီးယားအာဏာရွင္ရဲ႕က်န္း မာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပေဟဠိေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနနိုင္ပါတယ္။
Credit -လင္းေဇာ္ကို(D Nae Khit)
ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့တွင်မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့ မှာလျှပ်စစ်ပန်ကာ အပူလွန်ကဲရာမှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်း၍ နေအိမ် ၅ လုံးဆုံးရှုံးခဲ့
April 26, 2020 by Shwengwe Games
မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ မဟာစည်ရပ် သီရိမာလာလမ်းမှာ ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က လျှပ်စစ်ပန်ကာ အပူလွန်ကဲရာမှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့် နေအိမ် ၅ လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ ပခုက္ကူခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ပြောပါတယ်။
“အိမ်အပေါ်ထပ် လူမနေတဲ့အခန်းအ တွင်းမှာ လျှပ်စစ်ပန်ကာ ဖွင့်ခဲ့ရာကတဆင့် ပန်ကာ မော်တာ အပူလွန်ကဲလောင်တာဖြစ်ပြီးတော့ ဂွမ်းစောင်ထုပ်ပေါ်ကျရင်းနဲ့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းတာ၊ အားလုံး နေအိမ် ၅ လုံးပါ” လို့ ပခုက္ကူခရိုင်မီး သတ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်နိုင်က ပြောပါတယ်။
အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် မဟာစည်ရပ်၊ သီရိမာလာလမ်းနေ ဒေါ်ခင်စိန် (၇၈-နှစ်)ရဲ့ သုံးပင်နှစ်ခန်းတွဲ သွပ်မိုး ထရံ အုတ်ကာ နှစ်ထပ်နေအိမ်အပါအဝင် စုစုပေါင်း နေအိမ် ၅ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ဆုံးရုံးမှုခန့်မှန်းတန်ဖို့ ၃,၀၇၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက် မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူအားပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်း (ပ) ၅၁၇/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၈၅ နဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်း – ကိုလင်း (ချောက်)၊ ဓာတ်ပုံ- ပခုက္ကူခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ မွာလွ်ပ္စစ္ပန္ကာ အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္း၍ ေနအိမ္ ၅ လုံးဆုံးရႈံးခဲ့
မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္၊ မဟာစည္ရပ္ သီရိမာလာလမ္းမွာ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္က လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၅ လုံး မီးေလာင္ဆုံးရႈံးခဲ့တယ္လို႔ ပခုကၠဴခရိုင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။
“အိမ္အေပၚထပ္ လူမေနတဲ့အခန္းအ တြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ ဖြင့္ခဲ့ရာကတဆင့္ ပန္ကာ ေမာ္တာ အပူလြန္ကဲေလာင္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဂြမ္းေစာင္ထုပ္ေပၚက်ရင္းနဲ႕ ကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းတာ၊ အားလုံး ေနအိမ္ ၅ လုံးပါ” လို႔ ပခုကၠဴခရိုင္မီး သတ္ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္နိုင္က ေျပာပါတယ္။
အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ မဟာစည္ရပ္၊ သီရိမာလာလမ္းေန ေဒၚခင္စိန္ (၇၈-ႏွစ္)ရဲ႕ သုံးပင္ႏွစ္ခန္းတြဲ သြပ္မိုး ထရံ အုတ္ကာ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေနအိမ္ ၅ လုံး မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ဆုံး႐ုံးမႈခန႔္မွန္းတန္ဖို႔ ၃,၀၇၀,၀၀၀ က်ပ္ဖိုး ဆုံးရႈံးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ပခုကၠဴခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က မီးျငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရာ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲေလာက္ မီးျငႇိမ္းသတ္နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းတဲ့ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူအားပခုကၠဴၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၅၁၇/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၈၅ နဲ႕ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သတင္း – ကိုလင္း (ေခ်ာက္)၊ ဓာတ္ပုံ- ပခုကၠဴခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်၊ သတင်းစာတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား?
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေ အင်္ကျီလဲပြီး ခေါင်းကနေလောင်းပြီး ရေချိုးပစ်ရမှာလား? အပြင်ထွက်ရင် ဈေးထဲမှာ Social Distancing လုပ်ပြီး ခပ်ခွာခွာဈေးဝယ်ကြပါသလား?
ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယ်တယ်၊ ခပ်ခွာခွာရပ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ်။ ဒါဆိုရင် အင်္ကျီကို ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီး ပြန်လှမ်းထားလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချို့ဈေးတွေမှာ ဆိုင်တွေကို ခွာထားတယ်။ လူတွေကို ခပ်ဝေးဝေးက တန်းစီခိုင်းတယ်။ ပစ္စည်းပေးရင်တောင် ဝါးလုံးနဲ့။ အဲ့လိုတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ၇ လမ်းထိပ်တို့၊ ၁၈ လမ်းထိပ်တို့မှာတော့ လူတွေဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပူးကပ်နေမြဲပါပဲ။ တိုးကြိတ်ဈေးဝယ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါမျိုးဆို အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်ကိုတန်းပြီးလျှော်မယ့်အထဲ ထည့်တာကောင်းပါတယ်။
Social distancing ရှိတာနဲ့ အင်္ကျီပေါ်နဲ့ဆံပင်ပေါ်ကပ်နိုင်ခြေဘာလို့နည်းတာလဲ?
လေ့လာချက်တစ်ချို့အရ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပြီးရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပါတဲ့အမှုန် အများစုဟာလေထဲမှာမနေပဲ မြေကြီးပေါ်ကျသွားပါတယ်။ သေးတဲ့အမှုန်ဟာ လေထဲမှာနာရီဝက်အထိရှိနေနိုင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Aerodynamics ရူပဗေဒ သဘောတရားကို သင်ဖူးရင် ဒီအမှုန်တွေဟာ အင်္ကျီ၊ ဆံပင်ပေါ်ကပ်လို့မလွယ်တာကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်ကနေထိုးနေချိန်မှာ နေရောင်ထဲမှာ အမှုန်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ လွင့်ပြေးသွားပါတယ်။ လေထဲမှာဝဲနေတဲ့ မှို့စကလေးကို လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ ပြေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရေထဲမှာရှိတဲ့အနည်ကို လက်နဲ့ထိဖို့ကြိုးစားရင် မလွယ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြားခံရေထုကြောင့် လိုက်လေပြေးလေဖြစ်တာပါ။ လေထဲမှာရှိတဲ့လေထုဟာ ကျနော်တို့ကိုအမှုန်တွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူမထိမိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့က ငြိမ်နေရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်တယ်။ အရမ်းမြန်ရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်ပါတယ်။ (ပန်ကာဒလက်ကိုကြည့်ပါ။)
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ Social Distancing လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ခွာခွာဆက်ဆံခြင်းမူကို လက်ကိုင်ထားရင် လေထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုန်ကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကြားထဲကျပ်ညပ်ဈေးဝယ်ရရင် ဆံပင်နဲ့အင်္ကျီပေါ် ပိုးပါတဲ့အမှုန်တွေ ဒါရိုက်ကျနိုင်တာမို့ အင်္ကျီကို လျှော်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုတာပါ။
ဆံပင်ပေါ်အနောက်ကနေ တယောက်ယောက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဆိုဖာပေါ် ပေါ်လှဲမချပါနဲ့။အထူးသဖြင့်ခေါင်းအုံးပါ။တယောက်ယောက်က ဆံပင်ပေါ် တိုက်ရိုက်ချောင်းဆိုးခဲ့ရင်တောင်မှ အများစုကလေထဲလွှင့်သွားပါမယ်။ တကယ်ကူးစေတာက လက်ဆီကပါ။
Washionton University School of Medicine က Dr. Andrew Janowski ရဲ့အပြောအရ ပိုးပမာဏ X ကို ဆံပင်ပေါ် ရောက်စေခဲ့ရင် သင့်လက်နဲ့ပြန်ထိမိမှာက X ထက်အများကြီးနည်းတဲ့ပမာဏပါ။ အဲ့ဒီကနေ သင့်နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ဆီပြန်ရောက်မှာက အလွန့်အလွန်နည်းတဲ့ပမဏပါ။ ဒီရက်ထဲ သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ရင် ဆံပင်နမ်းတာတော့ သည်းခံကြပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က ပိုးဟာကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကို လေနဲ့ဆန်မတက်ပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်းဘက်ကို ပိုရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဆံပင်ကို သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဆံပင်တိုတို ထားကြပေါ့။
ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင် အဓိကကလက်ကို အသေအချာဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်ကိုခါပစ်တာဟာ လေထဲကိုပိုးတွေလွင့်ပြီး သင်ပြန်ရှုမိတတ်ပါတယ်။ Hair dryer နဲ့မှုတ်တာလည်း အဲ့ဒီအပူလောက်နဲ့ ပိုးမသေပါ။ အမှုန်တွေကို သင်ရှုမိတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သိထားစရာတစ်ခုက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့သက်တမ်းတစ်ဝက်သေနှုန်း Half Life က မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လေထဲမှာပိုမြန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဝတ်ရဲ့အသား Fabric က ရေဓာတ်ကိုစုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့အပေါ်ကိုကျထားတဲ့ ပိုးကိုသေတာမြန်စေပါတယ်။
လူဆီကပိုးကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်။ အဲ့ဒီပိုးကို ဖိနပ်က သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ တရုတ်မှာ ICU ထဲစီးခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ဝက်မှာ ပိုးသယ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင်ဖိနပ်ကို လက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့။ အိမ်ထဲမစီးမိပါစေနဲ့။ ကလေးတွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
ဖိနပ်ကို Wet Tissue နဲ့ မသုတ်ပါနဲ့၊ Wet Tissue လည်းနှမျောစရာကောင်းတဲ့အပြင် လက်ပေါ်လည်း ကူးစေနိုင်ပါတယ်။
အခုထိသတင်းစာ၊ စာရွက်ဖတ်လို့ ပိုးကူးတဲ့ Case မကြားမိသေးပါဘူး။ New England Journal ရဲ့လေ့လာချက်အရ စာစောင်တွေကို မဖတ်ခင် 24 နာရီထားပြီးမှ ဖတ်ပါတဲ့။ စက္ကူပေါ်မှာ 24 နာရီပဲအသက်ရှင်တယ်ဆိုပါတယ်။ စက္ကူကလည်းရေဓာတ်ကို စုပ်ယူတာမို့ ပိုးကိုသေစေပါတယ်။
Richard Myo Thant(26-April-2020)
အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ေလ အက်ႌလဲၿပီး ေခါင္းကေနေလာင္းၿပီး ေရခ်ိဳးပစ္ရမွာလား?အျပင္ထြက္ရင္ ေဈးထဲမွာ Social Distancing လုပ္ၿပီး ခပ္ခြာခြာေဈးဝယ္ၾကပါသလား?
ဥပမာ – City Mart မွာ ေဈးဝယ္တယ္၊ ခပ္ခြာခြာရပ္တယ္။ လူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈနည္းတယ္။ ဒါဆိုရင္ အက်ႌကို ခ်ိတ္နဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ျပန္လွမ္းထားလို႔ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ေဈးေတြမွာ ဆိုင္ေတြကို ခြာထားတယ္။ လူေတြကို ခပ္ေဝးေဝးက တန္းစီခိုင္းတယ္။ပစၥည္းေပးရင္ေတာင္ဝါးလုံးနဲ႔။အဲ့လိုတကယ္လုပ္ႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္။ရန္ကုန္က ၇ လမ္းထိပ္တို႔၊ ၁၈ လမ္းထိပ္တို႔မွာေတာ့ လူေတြဆိုတာတေယာက္နဲ႔တေယာက္ပူးကပ္ေနၿမဲပါပဲ။ တိုးႀကိတ္ေဈးဝယ္ေနၾကတာပါပဲ။ဒါမ်ိဳးဆို အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ အဝတ္ကိုတန္းၿပီးေလွ်ာ္မယ့္အထဲ ထည့္တာေကာင္းပါတယ္။
Social distancing ႐ွိတာနဲ႔ အက်ႌေပၚနဲ႔ဆံပင္ေပၚကပ္ႏိုင္ေျခဘာလို႔နည္းတာလဲ?
ေလ့လာခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕အရ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ၿပီးရင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပါတဲ့အမႈန္အမ်ားစုဟာေလထဲမွာမေနပဲ ေျမႀကီးေပၚက်သြားပါတယ္။‌ေသးတဲ့အမႈန္ဟာ ေလထဲမွာနာရီဝက္အထိ႐ွိေနႏိုင္တာကို ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ Aerodynamics ႐ူပေဗဒ သေဘာတရားကို သင္ဖူးရင္ ဒီအမႈန္ေတြဟာအက်ႌ၊ ဆံပင္ေပၚကပ္လို႔မလြယ္တာကို နားလည္ပါလိမ့္မယ္။
ျပတင္းေပါက္ကေနထိုးေနခ်ိန္မွာ ေနေရာင္ထဲမွာ အမႈန္ေတြေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။လက္နဲ႔လိုက္ဖမ္းၾကည့္ပါ။ လြင့္ေျပးသြားပါတယ္။ ေလထဲမွာဝဲေနတဲ့ မိႈ႕စကေလးကိုလိုက္ဖမ္းၾကည့္ပါ။ ေျပးသြားတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ေရထဲမွာ႐ွိတဲ့အနည္ကို လက္နဲ႔ထိဖို႔ႀကိဳးစားရင္ မလြယ္တာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ၾကားခံေရထုေၾကာင့္ လိုက္ေလေျပးေလျဖစ္တာပါ။ ေလထဲမွာ႐ွိတဲ့ေလထုဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုအမႈန္ေတြနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူမထိမိေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔က ၿငိမ္ေနရင္လည္းဖုန္တက္ျမန္တယ္။ အရမ္းျမန္ရင္လည္း ဖုန္တက္ျမန္ပါတယ္။(ပန္ကာဒလက္ကိုၾကည့္ပါ။)
ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ Social Distancing လို႔ေခၚတဲ့ ခပ္ခြာခြာဆက္ဆံျခင္းမူကို လက္ကိုင္ထားရင္ ေလထဲမွာ႐ွိေနတဲ့အမႈန္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ဒါေပမယ့္လူေတြၾကားထဲက်ပ္ညပ္ေဈးဝယ္ရရင္ ဆံပင္နဲ႔အက်ႌေပၚပိုးပါတဲ့အမႈန္ေတြ ဒါ႐ိုက္က်ႏိုင္တာမို႔ အက်ႌကို ေလွ်ာ္သင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳတာပါ။
ဆံပင္ေပၚအေနာက္ကေန တေယာက္ေယာက္ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။အိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ေခါင္းအုံးနဲ႔ ဆိုဖာေပၚ ေပၚလွဲမခ်ပါနဲ႔။အထူးသျဖင့္ေခါင္းအုံးပါ။ တေယာက္ေယာက္ကဆံပင္ေပတိုက္႐ိုက္ေခ်ာင္းဆိုးခဲ့ရင္ေတာင္မွအမ်ားစုကေလထဲလႊင့္သြားပါမယ္။တကယ္ကူးေစတာကလက္ဆီကပါ။
Washionton University School of Medicine က Dr. Andrew Janowski ရဲ႕အေျပာအရ ပိုးပမာဏ X ကို ဆံပင္ေပၚ ေရာက္ေစခဲ့ရင္သင့္လက္နဲ႔ျပန္ထိမိမွာက X ထက္အမ်ားႀကီးနည္းတဲ့ပမာဏပါ။အဲ့ဒီကေန သင့္ႏွာေခါင္း၊ပါးစပ္ဆီျပန္ေရာက္မွာက အလြန္႔အလြန္နည္းတဲ့ပမဏပါ။ဒီရက္ထဲ သမီးရည္းစားခ်ိန္းေတြ႕ရင္ ဆံပင္နမ္းတာေတာ့ သည္းခံၾကေပါ့။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကပိုးဟာကိုယ္ခႏၶာအေပၚပိုင္းကို ေလနဲ႔ဆန္မတက္ပဲကိုယ္ခႏၶာ ေအာက္ပိုင္းဘက္ကိုပိုေရာက္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ဆံပင္ကိုသိပ္စိတ္ပူစရာမ႐ွိပါ။ကိုဗစ္ကာလမွာဆံပင္တိုတို ထားၾကေပါ့။
ဒါ့ေၾကာင့္ေဈးကျပန္လာရင္ အဓိကကလက္ကို အေသအခ်ာေဆးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။အဝတ္ကိုခါပစ္တာဟာ ေလထဲကိုပိုးေတြလြင့္ၿပီးသင္ျပန္႐ႈမိတတ္ပါတယ္။Hair dryer နဲ႔မႈတ္တာလည္းအဲ့ဒီအပူေလာက္နဲ႔ ပိုးမေသပါ။အမႈန္ေတြကို သင္႐ႈမိတတ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သိထားစရာတစ္ခုကဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရဲ႕သက္တမ္းတစ္ဝက္ေသႏႈန္း Half Life က မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ေလထဲမွာပိုျမန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကအဝတ္ရဲ႕အသား Fabric က ေရဓာတ္ကိုစုပ္ပါတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူ႕အေပၚကိုက်ထားတဲ့ ပိုးကိုေသတာျမန္ေစပါတယ္။
လူဆီကပိုးကေျမႀကီးေပၚက်တယ္။ အဲ့ဒီပိုးကို ဖိနပ္က သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။တ႐ုတ္မွာ ICU ထဲစီးခဲ့တဲ့ ဖိနပ္တစ္ဝက္မွာပိုးသယ္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ေဈးကျပန္လာရင္ဖိနပ္ကိုလက္နဲ႔မကိုင္ပါနဲ႔။အိမ္ထဲမစီးမိပါေစနဲ႔။ ကေလးေတြနဲ႔ ေဝးရာမွာထားပါ။
ဖိနပ္ကို Wet Tissue နဲ႔ မသုတ္ပါနဲ႔၊Wet Tissue လည္းႏွေမ်ာစရာေကာင္းတဲ့အျပင္ လက္ေပၚလည္း ကူးေစႏိုင္ပါတယ္။
အခုထိသတင္းစာ၊စာ႐ြက္ဖတ္လို႔ ပိုးကူးတဲ့ Case မၾကားမိေသးပါဘူး။New England Journal ရဲ႕ေလ့လာခ်က္အရစာေစာင္ေတြကို မဖတ္ခင္ 24 နာရီထားၿပီးမွဖတ္ပါတဲ့။စကၠဴေပၚမွာ 24 နာရီပဲအသက္႐ွင္တယ္ဆိုပါတယ္။စကၠဴကလည္းေရဓာတ္ကို စုပ္ယူတာမို႔ ပိုးကိုေသေစပါတယ္။
ငယ်ငယ်က စိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့သူတွေကဒီလိုအပြု အမူတွေလုပ်တတ်ကြတယ်
လူတွေမှာငယ်ငယ်ကပျော်စရာတွေပဲ ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေရှိသလို အပျော်နဲ့ အငိုဒွန်တွဲနေတာကို ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပြီး စိတ်ဆင်းရဲစရာငယ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ကလေးအရွယ်မှာ စိတ်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ တစ်ချိန်လုံးရန် ဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရတာ ၊မောင်နှမတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာရတာ ၊ မိဘမေတ္တာကိုမခံစားရလို့စိတ်ဒဏ်ရာရတာ ၊ အားလုံးကပစ်ပယ်ထားလို့ စိတ်ဒဏ်ရာရတာ ၊တစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်ခံရလို့ စိတ်ဒဏ် ရာရတာ စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီလိုကလေးအရွယ်မှာအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ပြုမူတဲ့အမူအကျင့်တွေသူများတွေနဲ့မတူဘဲ နည်းနည်းကွဲပြားတယ်။ငယ်စဉ်ကစိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေက
ငယ်ငယ်ကကိုယ်ဟာအရမ်းဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် အဖြေကမှန်နေမှန်းသိရင်တောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အမြဲ သံသယဝင်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကတစ်ချိန်လုံးဝေဖန်ခံရတဲ့သူတွေက အမြဲတမ်းမေးခွန်းထောင်ချီ မေးမြန်းနေတတ်တယ်။
ငယ်ငယ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အ ဆက်ဆံမခံရတဲ့ကလေးတွေကကြီးလာတဲ့အခါမှာ သူတို့ကဘာကိုမှ မှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ခံစားနေတတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့သူတို့မမှားရင်တောင်တောင်းပန်နေတတ်တယ်။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကလေးဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်မာတယ် ၊ စိတ်မာမှလည်းဖြစ်မှာကိုး။ဒါပေမယ့် ငယ်ရွယ်တုန်းမှာခံစားချက်တွေအများကြီးကို ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် စိတ်မာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အရမ်းစိတ်ခံစားလွယ်တယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ကိုသူများတွေက “နင်ကညံ့တယ် ၊ငတုံး ၊ နင်လုပ်တာမကောင်းဘူး ၊ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ” လို့အပြောခံရရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့က အရမ်းကိုခက်ခဲသွားတတ်တယ်။ဒါကလည်း ငါလုပ်တာမှန်ပါ့မလား ၊ကောင်းပါ့မလား ၊ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ် ပျောက်ဆုံးသွားလို့ပဲဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်မိဘတွေကအမှားလေးတစ်ခုလုပ်မိတာနဲ့အပြစ်တင်တာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အဆူခံရတာတွေကို ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေက ကြီးလာတဲ့အခါမှာအရာရာကိုပြည့်စုံချင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ သူတို့ကဘာမဆိုတိကျနေအောင်၊သေသပ်အောင်၊ကွက်တိဖြစ်နေအောင်လုပ်ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်မှသူများတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ငယ်ငယ်ကအအော်ခံရတာတွေ ၊ အကြောက်တရားနဲ့ပဲနေခဲ့ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် ကျယ်လောင်တဲ့အသံတွေကို မခံနိုင်တော့ဘူး။ကျယ်လောင်တဲ့အသံတွေကိုသူတို့ကိုနှိပ်စက်ညှင်းပန်းတဲ့ အတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့ အမြဲတွဲပြီးခံစားမိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့သူတွေက သူတို့ကို ထားသွားမှာစွန့်ပစ်သွားမှာကို အရမ်းကြောက်တတ်ကြတယ်။
ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တာထက်စာရင်အစထဲကကို ပြ ဿနာတောထဲကနေ ရှောင်ထွက်တတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆင့်မီတယ်လို့ မခံစားရဘူး။
စိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့သူတွေအတွက် အရာရာတိုင်းကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတတ်ပြီး သူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ပြဿာနာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာသေးသေးလေးကိုတွေ့တာနဲ့တင် စိတ်ဖိစီးသွားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ လူတွေကိုယ့်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားဆက်ဆံတာကိုခေါင်းငုံ့ခံပြီးနေလာခဲ့တာကြောင့် ကိုယ် တိုင်လည်းဒေါသအိုးပေါက်ကွဲလွယ်တတ်တယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့ကလေးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ကနာကျင်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ခံစားတတ်ကြပြီး ဒီလိုလုပ်တာက အသက်ကြီးတဲ့အထိပါလာတတ်တယ်။
Commitment Issues တွေရှိတတ်တယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းစိတ်ထိခိုက်နာကျင်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်က တခြားသူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါ။တခြားသူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ပြီးသူတို့နဲ့အတူဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာစိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာရဖူးတွေကဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေ ၊ဒီထဲကမှကောင်းတာတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘဝမှာ မကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ မကောင်းတာတွေကိုပဲစိတ်ထဲထားမယ်ဆိုရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အထိသူတို့ရှင်သန်နေမှာမဟုတ်လို့ပဲ။
တစ်နည်းပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်နှိမ့်ချတတ်တယ်။ အတိတ်ကဆိုးတာနဲ့ပဲသူတို့ကလူဆိုးတွေဖြစ်မသွားကြဘူး။သူတို့တွေကပိုပြီးသန်မာလာတယ်။ ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာပြီးရှိတာလေးနဲ့နေတတ်လာတယ်။ သူတို့ကရှင်ကျန်သူတွေဖြစ်တယ်။
ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကလူတိုင်းအ တွက်မှန်ချင်မှလည်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ဘေးနာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေက ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးလိုက်ပါ။ လူတိုင်းက ပျော်ရွှင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။
Credit = Thi Ha
ရှုတင်မိတ်ကပ်လိုက်လိမ်းစဉ်ကာလက ဒွေးရဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို အောက်မေ့စွာနဲ့ သတိတရပြောလာတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)
April 26, 2020 April 26, 2020 by Shwengwe Games
မင်းသားကြီးဒွေးကသူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုအပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတာအခုဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုမကတော့ပါဘူး။ဒွေးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေ၊မိသားစုတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ျိ ကိုင်ဖက်တွေကတော့သွားလေသူဒွေးကိုဒီနေ့ဒီအခန်ထိမေ့လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။နာမည်ကြီးမိတ်ကပ်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ကလည်းသူမိတ်ကပ်စလိမ်းကာစဘဝတုန်းက ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ဒွေးရဲ့အကြောင်းကို အခုလိုအမှတ်တရပြောပြလာပါတယ်။
“ရုပ်ရှင်လောကကိုမိတ်ကပ်လိုက်ပြင်ဖြစ်တော့လိုက်ရတဲ့မင်းသမီ းကလဲအဲ့ခေတ်ကအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုကိုသားကြီးကိုလွင်မိုး ဦးကျော်ကျော်ဟိန်းတို့နဲ့ကအမြဲဆုံဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့အန်ကယ်လေးကိုလူမင်းခန့်စည်သူမင်းမော်ကွန်းစသည်ဖြင့်ပေါ့လေမိုးတွင်းဆိုရင်ပုဂံပုပ္ပါးဘက်အရိုက်များပြီးနွေဆိုရင်မေမြို့တက်ရိုက်ကျတာများပါတယ်ကျန်တဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာပဲရိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်။”
“ကိုသားကြီးက စက်အဖွဲ့တွေကို လဲအမြဲမုန်ဖိုးပေးသလိုကြုံရင်ကြုံသလိုမိတ်ကပ်ဆရာအခြောက်မလေးတွေလဲ မုန့်ဖိုးပေးပါတယ် ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ စသည်ဖြင့်ပေါ့။အဲခေတ်က ၅၀၀၀ ဆို ကျမတို့မိသားစုအဖိုးအမေညီမလေးကျမအပါဝင်မိသားစု လေးယောက်တပတ်စာထမင်းဟင်းအိမ်စရိတ်ရပါတယ် စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အကိုပါအမြဲလည်းမုန့်ဖိုးပေးပါတယ်။အဲခေတ်က ကားရိုက်ကြေးတကား၃၀၀၀၀ ရပါတယ်။မနည်းပါဘူး။ဆိုင်ကိုပြန်အပ်ရပါတယ်။၁၀ ကားစာတခါထုတ်ရင် ၃သိန်းရပါတယ်ဆိုင်ကိုပြန်အပ်ရင်ရူတင်လိုက်ခ ၅ သောင်း ပြန်ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်၁၀ကား လိုက်ထားတာဆိုတော့ ၄ လကျော်လောက်ကြာပါတယ်အိမ်စရိတ်မလောက်ဖူးပေါ့။
“ရှင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်အမေဆေးဖိုးညီမကျောင်းစရိတ်အဖိုးနဲ့ မိသားစုစားစရိတ်တွေကရှိသေးတယ်မလားဒါတောင်တိုက်ခန်းလေးက ၇လွှာမှာအပိုင်ရှိလိုတော်ပါသေးတယ်ပြောချင်တာကတော့ကိုသားကြီးနဲ့ကားရိုက်ရင်မုန့်ဖိုးအပိုလေးရတော့ အသက်ရှူချောင်တာလေးကိုပြောချင်တာပါ။မလတ်ကတော့မသိရှာပါဘူး။တကား ၃သောင်းဆိုတခါထုပ် ၁၀ကားစာသုံးသိန်းရတယ်ပဲထင်နေတာ။အဲခေတ်ကရွှေတကျပ်သား ၅သောင်းခေတ် လေ သုံးသောင်းဆိုတာအများကြီး။ကိုယ်ကပြန်ရတာတ ကားစာ၅၀၀၀ဆိုင်ကဖြတ်တာ ၂၅၀၀၀ မိတ်ကပ်ဆံပင်ပစ္စည်းတွေတော့ပေးပါတယ်ဒါတွေမတွက်ပါဘူးရူတင်လိုက်ချင်တာကိုကိုယ်လိုက်ရတဲ့မင်းသမီးကလဲကိုယ်ဘလိုပြင်ပြင်သည်းခံပေးတော့ ပျော်တာပေါ့လေ။မလောက်မငပိုက်ဆံလိုလဲရှိတဲ့ ရွှေတိုရွှေစ စတီးချိုင့်ကစအပေါင်ဆိုင်ပို့ ရူတင်လိုက်ခဲ့တဲ့ရူတင်ရူးမလေးပါနော်။”
“ကိုသားကြီးနဲ့ ဟိုတယ်အတူတူတည်းရတာလဲများပါတယ်။ကိုသားကြီးဟိုတယ်ကထွက်သွားပြီးပြန်လာပြီဆိုအကိုရေမွှေးနံကဟိုတယ်တခုလုံးမွှေးကြိုင်နေလေရော။အဲ့ခေတ်ထဲကနာမည်ကြီး ယောကျာ်းဆန်သောအနံ ရေမွှေးထင်ပါတယ်။အသုံးဆောင်အနေထိုင်ကလည်းသန့်မှသန့်အဓိက ကကိုသားကြီးရဲ့မျက်လုံးပဲ ကြည့်လိုက်တာနဲ့စကားပြောနေသလိုလိုကိုယ်တွေကတော့ကြည့်တောင်ခိုးပဲ့ကြည်ရဲပါတယ်။ကူညီတက်တယ်စိတိကောင်းရှိတဲအကိုအစောကြီးကြွေလွင့်သွားလိုနှမျောမိတာအမှန်ပါ။
ဒီphoto လေးကတော့ရူတင်အပြီး အကိုမွေးနေ့ မေမြို့မှာစားကျသောက်ကျတာဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရိုက်တာပဲအဲ့ကားနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးဗိဒီရိုကိုသားကြီးမနန္ဒာတင့်တင့်ထွန်းတို့နဲ့ရိုက်တာအရင်တုန်းကဆိုရူတင်တွေမှာစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအလုပ်ပြီးရင်အားလုံးမိသားစုလိုပါပဲရှင်။တလုပ်စားဖူးသူ့ကျေးဇူးကိုသားကြီး ကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘဝမှာစံစားနေရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်”ဆိုပြီးအမှတ်တရတွေပြောပြထားပါတယ်။ညီညီမောင်ရဲ့အမှတ်တရစကားတွေကြောင့်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒွေးကိုပြန်လည်သတိရအောက်မေ့သွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ရႈတင္မိတ္ကပ္လိုက္လိမ္းစဥ္ကာလက ေဒြးရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြကို ေအာက္ေမ့စြာနဲ႕ သတိတရေျပာလာတဲ့ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း)
မင္းသားႀကီးေဒြးကသူခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြအကုန္လုံးကိုအၿပီးတိုင္ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားတာအခုဆိုရင္ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုမကေတာ့ပါဘူး။ေဒြးကိုခ်စ္ၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြ၊မိသားစုေတြနဲ႕ လုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကေတာ့သြားေလသူ ေဒြးကို ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္ထိေမ့လို႔မရနိုင္ေသးပါဘူး။ နာမည္ႀကီးမိတ္ကပ္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း)ကလည္းသူမိတ္ကပ္စလိမ္းကာစဘဝတုန္းက ေက်းဇူးရွိခဲ့တဲ့ေဒြးရဲ႕အေၾကာင္းကိုအခုလိုအမွတ္တရေျပာျပလာပါတယ္။
“႐ုပ္ရွင္ေလာကကိုမိတ္ကပ္လိုက္ျပင္ျဖစ္ေတာ့လိုက္ရတဲ့မင္းသမီးကလဲအဲ့ေခတ္ကအကယ္ဒမီမင္းသမီးဆိုေတာ့႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးဆိုကိုသားႀကီးကိုလြင္မိုးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟိန္းတို႔နဲ႕ကအၿမဲဆုံျဖစ္ပါတယ္ေနာက္ပိုင္းေတာ့အန္ကယ္ေလးကိုလူမင္းခန႔္စည္သူမင္းေမာ္ကြန္း စသည္ ျဖင့္ေပါ့ေလမိုးတြင္းဆိုရင္ပုဂံပုပၸါး ဘက္အရိုက္မ်ားၿပီးေႏြဆိုရင္ေမၿမိဳ႕တက္ရိုက္က်တာမ်ားပါတယ္က်န္တဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ရန္ကုန္မွာပဲရိုက္ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။”
“ကိုသားႀကီးကစက္အဖြဲ႕ေတြကိုလဲအၿမဲမုန္ဖိုးေပးသလိုႀကဳံရင္ႀကဳံသလိုမိတ္ ကပ္ းဆရာ အေျခာက္မေလးေတြလဲ မုန႔္ဖိုးေပးပါတယ္၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အဲေခတ္က ၅၀၀၀ဆိုက်မတို႔မိသားစုအဖိုး အေမ ညီမေလး က်မအပါဝင္မိသားစု ေလးေယာက္တပတ္စာထမင္းဟင္းအိမ္စရိတ္ရပါတယ္ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့အကိုပါအၿမဲလည္းမုန႔္ဖိုးေပးပါတယ္။အဲေခတ္က ကားရိုက္ေၾကးတကား ၃၀၀၀၀ ရပါတယ္။မနည္းပါဘူး။ဆိုင္ကိုျပန္အပ္ရပါတယ္။ ၁၀ကားစာတခါထုတ္ရင္ ၃သိန္းရပါတယ္ ဆိုင္ကိုျပန္အပ္ရင္႐ူတင္လိုက္ခ ၅ ေသာင္း ျပန္ရပါတယ္။႐ုပ္ရွင္ ၁၀ကား လိုက္ထားတာဆိုေတာ့ ၄ လ ေက်ာ္ေလာက္ၾကာပါတယ္အိမ္စရိတ္မေလာက္ဖူးေပါ့။
“ရွင္လြယ္လြယ္ေျပာရရင္အေမေဆးဖိုးညီမေက်ာင္းစရိတ္အဖိုးနဲ႕ မိသားစု စားစရိတ္ေတြကရွိေသးတယ္မလားဒါေတာင္တိုက္ခန္းေလးက ၇လႊာမွာအပိုင္ရွိလိုေတာ္ပါေသးတယ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ကိုသားႀကီးနဲ႕ကားရိုက္ရင္ မုန႔္ဖိုးအပိုေလးရေတာ့အသက္ရႉေခ်ာင္ တာေလးကိုေျပာခ်င္တာပါ။မလတ္ကေတာ့မသိရွာပါဘူး။တကား ၃ေသာင္း ဆိုတခါထုပ္ ၁၀ကားစာသုံးသိန္းရတယ္ပဲထင္ေနတာ။ အဲေခတ္က ေ႐ႊတက်ပ္သား ၅ေသာင္းေခတ္ ေလ သုံးေသာင္းဆိုတာအမ်ားႀကီး။ကိုယ္ကျပန္ရတာတကားစာ၅၀၀၀ ဆိုင္ကျဖတ္တာ ၂၅၀၀၀ မိတ္ကပ္ဆံပင္ပစၥည္းေတြေတာ့ေပးပါတယ္ဒါေတြမတြက္ပါဘူး ႐ူတင္လိုက္ခ်င္တာကိုကိုယ္လိုက္ရတဲ့ မင္းသမီးကလဲကိုယ္ဘလိုျပင္ျပင္ သည္းခံေပးေတာ့ ေပ်ာ္တာေပါ့ေလ။မေလာက္မင ပိုက္ဆံလိုလဲ ရွိတဲ့ ေ႐ႊတိုေ႐ႊစစတီးခ်ိဳင့္ကစ အေပါင္ဆိုင္ပို႔ ႐ူတင္လိုက္ခဲ့တဲ့ ႐ူတင္႐ူးမေလးပါေနာ္။”
“ကိုသားႀကီးနဲ႕ဟိုတယ္အတူတူတည္းရတာလဲမ်ားပါတယ္။ကိုသားႀကီး ဟိုတယ္က ထြက္သြားၿပီး ျပန္လာၿပီဆိုအကိုေရေမႊးနံကဟိုတယ္တခုလုံးေမႊးႀကိဳင္ေနေလေရာ။ အဲ့ေခတ္ထဲကနာမည္ႀကီး ေယာက်ာ္းဆန္ေသာအနံ ေရေမႊးထင္ပါတယ္။အသုံးေဆာင္အေနထိုင္ကလည္း သန႔္မွသန႔္ အဓိကကကိုသားႀကီးရဲ႕မ်က္လုံးပဲၾကည့္လိုက္တာနဲ႕ စကားေျပာေနသလိုလိုကိုယ္ေတြကေတာ့ၾကည့္ေတာင္ခိုးပဲ့ၾကည္ရဲပါတယ္။ကူညီတက္တယ္စိတိေကာင္းရွိတဲအကို အေစာႀကီးေႂကြလြင့္သြားလို ႏွေမ်ာမိတာအမွန္ပါ။
ဒီphoto ေလးကေတာ့ ႐ူတင္အၿပီး အကိုေမြးေန႕ ေမၿမိဳ႕မွာစားက်ေသာက္က်တာဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္းရိုက္တာပဲအဲ့ကားနာမည္ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူးဗိဒီရို ကိုသားႀကီးမနႏၵာတင့္တင့္ထြန္းတို႔နဲ႕ရိုက္တာအရင္တုန္းကဆို႐ူတင္ေတြမွာစည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႕ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာအလုပ္ၿပီးရင္အားလုံးမိသားစုလိုပါပဲရွင္။တလုပ္စားဖူးသူ႕ေက်းဇူးကိုသားႀကီး ေကာင္းရာမြန္ရာဘုံဘဝမွာစံစားေနရမယ္ဆိုတာယုံၾကည္ပါတယ္”ဆိုၿပီး အမွတ္တရေတြေျပာျပထားပါတယ္။ညီညီေမာင္ရဲ႕အမွတ္တရစကားေတြေၾကာင့္ပရိသတ္ႀကီးလည္းေဒြးကို ျပန္လည္သတိရေအာက္ေမ့သြားမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
“မိန််းကလေးအလှ အိိပ်ယာထ”ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကား၏ အဓိပ္ပါယ်
မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ၏ အဓိ ပ္ပါယ် (မသိသေးသူများရှယ်ထား)
မိန်းကလေးအလှအိပ်ယာထတဲ့။ဒီ ဆိုရိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုမသိတဲ့သူတွေ ရှိနေကြ ပါလိမ့်မယ်။ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အဆိုအရ မိန်းကလေး ရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာလို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အခါမှာကိုယ်လက်သန့်စင်မှုနဲ့အစပြုရပါတယ် ။
ထို့နောက်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားအားပန်း ရေချမ်း ၊ဆီမီးပူဇော်ခြင်း ၊ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း ၊ရှိခိုးထိုက်သူရှိခိုးပူဇော်ခြင်းစတဲ့ အလုံးစုံပူဇော်မှုတွေဖြင့်နေ့သစ်မှာ မင်္ဂလာယူရပါတယ် ။
မိမိအိမ်ကိုတံမြက်စည်းလှဲခြင်း ၊သန့်ရှင်းမှု အစုစုတို့ဖြင့်အိမ်၏ဂုဏ်ကျက်သရေ ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရပါတယ် ။ပုဗ္ဗာစရိယမိနှင့်ဖကလည်းမိမိသမီးလေးများကိုလက်ပွန်းတတီးသွန်သင်ဆုံးမရပါတယ်။
ဒါမှလည်းမိမိတို့သမီးမိန်းကလေးဟာ အမှန်တကယ်လှပတဲ့မိန်းကလေးစစ်စစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုတစ်ချို့ကတကယ် လှတဲ့မိန်းကလေးတွေက၊အိပ်ယာထရင်တောင်၊ကပိုကယိုအလှလေးနဲ့ လှနေတာလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့မဟုတ် ပါဘူး။
ဟိုးအရင်ကရှေးလူကြီးတွေဟာကိုယ့်သားသမီးနဲ့လက်ထပ်မယ့်မိန်းကလေး အိမ်ကိုတစ်ရက်တန်သည်နှစ်ရက်တန် သည်သွားအိပ်တတ်ကြသတဲ့။အမှန်က လေ့လာရေး ခရီးပေါ့နော်
အထက်က ပြောခဲ့သလို အဲဒီ မိန်းကလေးက လုပ်ခဲ့ရင် ဒါဟာ သူတို့ သတ် မှတ် ထားတဲ့” မိန်းကလေး အလှအိပ်ယာ ထ ” မြင်တွေ့ ရမှသာသူတို့ိရဲ့ အဖိုးတန် ချွေးမ အဖြစ် သတ် မှတ် ကြ ပါ တယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်” မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံး သဘော ပေါက်ကြ လိမ့်မယ် ထင် ပါ တယ် ။
Credit:မေတ္တာဖြင့်…အရှှင်ပုည( ဝကုန်း )
“မိန္္းကေလးအလွ အိိပ္ယာထ”ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကား၏ အဓိပၸါယ္
မိန္းကေလးအလွ အိပ္ယာထ၏ အဓိ ပၸါယ္ (မသိေသးသူမ်ားရွယ္ထား)
မိန္းကေလးအလွအိပ္ယာထတဲ့။ဒီ ဆိုရိုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုမသိတဲ့သူေတြ ရွိေနၾက ပါလိမ့္မယ္။ေရွးလူႀကီးေတြရဲ႕အဆိုအရ မိန္းကေလး ရယ္လို႔ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဆိုရင္အ႐ြယ္ေရာက္လာလို႔ အိပ္ယာနိုးတဲ့ အခါမွာကိုယ္လက္သန႔္စင္မႈနဲ႕ အစျပဳ ရပါ တယ္ ။
ထို႔ေနာက္မိမိအိမ္မွာရွိတဲ့ဘုရားအားပန္း ေရခ်မ္း ၊ဆီမီးပူေဇာ္ျခင္း ၊ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္း ၊ရွိခိုးထိုက္သူရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းစတဲ့ အလုံးစုံပူေဇာ္မႈေတြျဖင့္ေန႕သစ္မွာ မဂၤလာယူရပါတယ္ ။
မိမိအိမ္ကိုတံျမက္စည္းလွဲျခင္း ၊သန႔္ရွင္းမႈ အစုစုတို႔ျဖင့္အိမ္၏ဂုဏ္က်က္သေရ ျပည့္စုံေအာင္ျပဳလုပ္ရပါတယ္ ။ပုဗၺာစရိယမိႏွင့္ဖကလည္းမိမိသမီးေလးမ်ားကိုလက္ပြန္းတတီးသြန္သင္ဆုံးမရပါတယ္။
ဒါမွလည္းမိမိတို႔သမီးမိန္းကေလးဟာ အမွန္တကယ္လွပတဲ့မိန္းကေလးစစ္စစ္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ဒါကိုတစ္ခ်ိဳ႕ကတကယ္ လွတဲ့မိန္းကေလးေတြက၊အိပ္ယာထရင္ေတာင္၊ကပိုကယိုအလွေလးနဲ႕ လွေနတာလို႔ထင္တတ္ၾကပါတယ္ ။တကယ္ေတာ့မဟုတ္ ပါဘူး ။
ဟိုးအရင္ကေရွးလူႀကီးေတြဟာကိုယ့္သားသမီးနဲ႕လက္ထပ္မယ့္မိန္းကေလး အိမ္ကိုတစ္ရက္တန္သည္ႏွစ္ရက္တန္ သည္သြားအိပ္တတ္ၾကသတဲ့။အမွန္က ေလ့လာေရး ခရီးေပါ့ေနာ္
အထက္က ေျပာခဲ့သလို အဲဒီ မိန္းကေလးက လုပ္ခဲ့ရင္ ဒါဟာ သူတို႔ သတ္ မွတ္ ထားတဲ့” မိန္းကေလး အလွ အိပ္ယာ ထ ” ျမင္ေတြ႕ ရမွသာသူတို႔ိရဲ႕ အဖိုးတန္ ေခြၽးမ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၾက ပါ တယ္ ။
ဒီေလာက္ဆိုရင္” မိန္းကေလးအလွ အိပ္ယာထ ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံး သေဘာ ေပါက္ၾက လိမ့္မယ္ ထင္ ပါ တယ္ ။
Credit:ေမတၱာျဖင့္…အရွွင္ပုည( ဝကုန္း )
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီ
၁။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည နှင့် (၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်အစောပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယ + တတိယအသုတ်) နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင်
COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု (လူနာသစ်) = (၂) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၁၄၆) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
၃။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကို
အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၇၂) ခုအား (၃) သုတ်ခွဲ၍ လည်းကောင်း၊
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၄) ခုအား (၂) သုတ်ခွဲ၍ လည်းကောင်း စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၂) ဦးအား သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့ လွှဲပြောင်းကုသမှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀) နာရီ
၁။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည ႏွင့္ (၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ဒုတိယ + တတိယအသုတ္) ႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ –
COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ (လူနာသစ္) = (၂) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။
၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၂၆-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း (၁၄၆) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
၃။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားကို –
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇၂) ခုအား (၃) သုတ္ခြဲ၍ လည္းေကာင္း၊
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၄) ခုအား (၂) သုတ္ခြဲ၍ လည္းေကာင္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄။ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၂) ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သွားတွေကို ဖြူသန့်သွားစေမယ့်အလွယ် ကူဆုံး နည်းလမ်းများ
လိမ္မော်သီးစားပြီးရင်လိမ္မော်ခွံကို လွှင့်မပစ်ဘဲသွားကိုပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ။ လိမ္မော်ခွံကသွားဝါတာ၊သွားဂျိုးကပ်တာတွေကိုချက်ချင်းဖြူသန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ လိမ္မော်သီးတို့ကိုကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကိုသွားပွတ်တံနဲ့ယူကာသွားတိုက်သလိုတိုက်ပေးလိုက်ပါ။နေ့တိုင်းမနက်တစ်ခါ၊ညဘက်တစ်ခါပုံမှန်တိုက်ပေးသွားရင်သွားမှာကပ်နေတဲ့ဂျိုးတွေလုံးဝကိုပြောင်စင်ပြီးသွားလေးတွေဖွေးသွားပါလိမ့်မယ်။
သြားေတြကို ျဖဴသန႔္သြားေစမယ့္ အလြယ္ဆုံး နည္းလမ္းမ်ား
လိေမၼာ္သီးစားၿပီးရင္လိေမၼာ္ခြံကို လႊင့္မပစ္ဘဲသြားကိုပြတ္တိုက္ေပးလိုက္ပါ။ လိေမၼာ္ခြံကသြားဝါတာ၊သြားဂ်ိဳးကပ္တာေတြကိုခ်က္ခ်င္းျဖဴသန့္သြားေစနိုင္ပါတယ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊စေတာ္ဘယ္ရီသီးနဲ႕ လိေမၼာ္သီးတို႔ကိုႀကိတ္စက္နဲ႕ႀကိတ္ၿပီး ရလာတဲ့အႏွစ္ကိုသြားပြတ္တံနဲ႕ယူကာသြားတိုက္သလိုတိုက္ေပးလိုက္ပါ။ေန႕တိုင္းမနက္တစ္ခါ၊ညဘက္တစ္ခါပုံမွန္တိုက္ေပးသြားရင္သြားမွာကပ္ေနတဲ့ဂ်ိဳးေတြလုံးဝကိုေျပာင္စင္ၿပီးသြားေလးေတြေဖြးသြားပါလိမ့္မယ္။
”ခြေစွယ်ငုတ်နေသူများ ”မနာမကျင်ပဲ ပျောက်ကင်းစေမည့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း
နောက်တော့ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ခု ကျွန် တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာတစ်ဖြေးဖြေးပြန့်လာပြီးနောက်ထပ်ခြေစွယ်မငုတ်တော့ပါဘူး။ခြေသဲလေးကလည်းနူးညံ့ချောမွတ်ပြီးလှပလာပါလိမ့်မယ်။
ဆေးကအဝေးကြီးရှာစရာမလိုတဲ့တွက် အားလုံးအလွယ်တကူပျောက်ကင်းသက်သာနိုင်ပါတယ်။အိမ်သုံးဆား။ ဟင်းအိုးထဲခတ်တဲ့ဆားပါ။
တစ်နေ့ကို ၅ကြိမ်လောက် ပုံပေးပါ။ ၃ ရက်နေလျှင်ဆားပုံထားတဲ့နေရာက အရေခွံကွာကျလာပါလိမ့်မယ်။
မနာကျင်တော့တာကိုလည်းအံ့ဩစွာ တွေ့ရမှာပါ။အရေခွံကိုလက်သည်းညှပ်နဲ့ ညှပ်ပစ်လို့ရပါတယ်။လုံးဝမနာကျင်ပါဘူး။
ခြေသည်းလေးပြန့်လာချင်ရင်တော့ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ခြေသည်းထောင့်က ကုပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆားပုံပေးပါ။
အထူးသဖြင့်တောင်သူဦးကြီးတွေ၊ ဒေါ်ကြီးတွေအသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်။စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိလို့ယုံကြည်စွာစမ်းကြည့်ပါ။
Credit – ဆိုင်းရဲထွန်း
”ေျခစြယ္ငုတ္ေနသူမ်ား ”မနာမက်င္ပဲ ေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အလြယ္ကူဆုံး နည္းလမ္း
ေနာက္ေတာ့ျပန္ျဖစ္တာပါပဲ။ခု ကြၽန္ ေတာ္ေျပာျပမယ့္နည္းေလးက မနာမက်င္ပဲ ေျခသည္းဟာတစ္ေျဖးေျဖးျပန႔္လာၿပီးေနာက္ထပ္ေျခစြယ္မငုတ္ေတာ့ပါဘူး။ေျခသဲေလးကလည္းႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ၿပီးလွပလာပါလိမ့္မယ္။
ေဆးကအေဝးႀကီးရွာစရာမလိုတဲ့တြက္ အားလုံးအလြယ္တကူေပ်ာက္ကင္းသက္သာနိုင္ပါတယ္။အိမ္သုံးဆား။ ဟင္းအိုးထဲခတ္တဲ့ဆားပါ။
တစ္ေန႕ကို ၅ႀကိမ္ေလာက္ ပုံေပးပါ။ ၃ ရက္ေနလွ်င္ဆားပုံထားတဲ့ေနရာက အေရခြံကြာက်လာပါလိမ့္မယ္။
မနာက်င္ေတာ့တာကိုလည္းအံ့ဩစြာ ေတြ႕ရမွာပါ။အေရခြံကိုလက္သည္းညွပ္နဲ႕ ညွပ္ပစ္လို႔ရပါတယ္။လုံးဝမနာက်င္ပါဘူး။
ေျခသည္းေလးျပန႔္လာခ်င္ရင္ေတာ့ တစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ေျခသည္းေထာင့္က ကုပ္ေနတဲ့ေနရာေလးေတြမွာဆားပုံေပးပါ။
အထူးသျဖင့္ေတာင္သူဦးႀကီးေတြ၊ ေဒၚႀကီးေတြအသုံးတည့္မယ္ထင္ပါတယ္။စမ္းသုံးၾကည့္လိုက္ပါဦး။ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိလို႔ယုံၾကည္စြာစမ္းၾကည့္ပါ။
Credit – ဆိုင္းရဲထြန္း
Covid 19 ရောဂါကြောင့် စိတ်ညစ်မနေဘဲ စိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ပြန်တိုက်ကြရန်ပြောလိုက်တဲ့ဖွေးဖွေး
ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုလိုက်ပြီး ပိုင်နိုင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးအကယ်မီဆု(၃)ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာသူတစ်ယောက်ပါ။လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားရပြီး အဆိုပါရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း Covid-19ရောဂါဆောင်ရန်ရှာင်ရန်တွေကို စနစ်တကျလိုက်နာကာ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အဆိုပါရောဂါကြောင့်စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေမယ့် စာသားလေးတစ်ချို့ကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ဖွေးဖွေးက” ချစ်ခြင်းတရား စေတနာတရားတအားထက်သန်တဲ့ မြန်မာပြည် ဒီ Covid 19 ကို မဖြစ်ခင် ဂုဏ်ထူးမှတ်ရအောင်ကာကွယ်ကြမယ်
ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လဲစိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ပြန်တိုက်မယ်လို့ အားလုံး စိတ်မညစ်နဲ့ … တွေးမပူနဲ့…ဖွေးဆို သတင်းတွေမဖတ်တော့တာ ၂ပတ်လောက်ကြာပြီ စားတယ် … အပင်စိုက်တယ်.. ဘုရားရှိခိုးတယ် ဘာမှမတွေးပဲ ငေးငေး လေး အေးဆေးလေး နေမယ် I respect all the living beings …”ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးဖွေးပြောသလိုပဲ Covid 19 ရောဂါကြောင့် စိတ်ညစ်မနေဘဲ စိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ပြန်တိုက်ကြရအောင်နော်…
Sources Phway Phway
Covid 19 ေရာဂါေၾကာင့္ စိတ္ညစ္မေနဘဲ စိတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ ျပန္တိုက္ၾကရန္ေျပာလိုက္တဲ့ေဖြးေဖြး
ေဖြးေဖြးကေတာ့ ပရိသတ္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ွိထားတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကိုလိုက္ၿပီး ပိုင္ႏိုင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးအကယ္မီဆု(၃)ဆုကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္နဲ႔သိမ္းပိုက္ရ႐ွိထားတာသူတစ္ေယာက္ပါ။လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုရပ္နားထားရၿပီး အဆိုပါေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
သူမကိုယ္တိုင္လည္း Covid-19ေရာဂါေဆာင္ရန္႐ွာင္ရန္ေတြကို စနစ္တက်လိုက္နာကာ အိမ္ထဲမွာပဲေနေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ အဆိုပါေရာဂါေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနၾကတဲ့သူေတြအားလုံးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြျဖစ္ေစမယ့္ စာသားေလးတစ္ခ်ိဳ႕ကို သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ ေဖြးေဖြးက” ခ်စ္ျခင္းတရား ေစတနာတရားတအားထက္သန္တဲ့ ျမန္မာျပည္ ဒီ Covid 19 ကို မျဖစ္ခင္ ဂုဏ္ထူးမွတ္ရေအာင္ကာကြယ္ၾကမယ္
ျဖစ္သြားခဲ့ရင္လဲစိတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ ျပန္တိုက္မယ္လို႔ အားလုံး စိတ္မညစ္နဲ႔ … ေတြးမပူနဲ႔…ေဖြးဆို သတင္းေတြမဖတ္ေတာ့တာ ၂ပတ္ေလာက္ၾကာၿပီ စားတယ္ … အပင္စိုက္တယ္.. ဘုရား႐ွိခိုးတယ္ ဘာမွမေတြးပဲ ေငးေငး ေလး ေအးေဆးေလး ေနမယ္ I respect all the living beings …”ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ေဖြးေဖြးေျပာသလိုပဲ Covid 19 ေရာဂါေၾကာင့္ စိတ္ညစ္မေနဘဲ စိတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ ျပန္တိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္…
← Previous Page1 … Page396 Page397 Page398 … Page418 Next →